Rescue zuru on Västbyn! | Holmbygden.se
Rescue zuru on Västbyn!
Ihe na 20 September, 2016 site Holmbygden.se
“The ụgbọ mmiri ike na a ga-eji na ọnọdụ mberede”, na-ekwu na ihe ịrịba ama na West Village igwu. Ugbu a ọ na-egosi na nnapụta ụgbọ mmiri, Otú ọ dị, e zuru.
Dịcha, nnapụta ụgbọ mmiri na Västbyn zuru a September. disclosures na-natara Biko ma ọ bụrụ na ndị ọzọ hụrụ ihe ọ bụla. Dị Ugboro asa ahụ ọbịa ga-anapụta ụgbọ mmiri nọrọ ebe ahụ n'oge okpomọkụ. Ugbu a, Otú ọ dị, ọ na-e kwuru na ọ na-efu efu, nakwa nke e juru gburugburu Anụ Mmịkpọ ebe.
Onyeàmà kwuru banyere ekwe omume na-ezu ohi
Ọ nwere ike kwukwara na-na 6 September gburugburu 17 elekere si ụgbọ mmiri hụrụ a van na-asa ahụ. Mgbe ị tụgharịrị chee n'ikpere mmiri site ụgbọ mmiri, otú ahụ ka van na mberede na a ọsọ ọsọ je na kabinet ụzọ oghe. Mgbe nke ahụ gasịrị, e nwere dịkarịa ala dịghị ụgbọ mmiri. Ọ bụrụ na ọ dị mgbe ahụ e tupu ya nwere ike ghara kwuru n'aka, ma yikarịrị o nwere ike ịbụ yiri.
Bụ onye ọ bụla ọzọ ndị nwere ike ikwu mgbe ha hụrụ ndị ọhụrụ n'ebe dị nso ma ọ bụ hụ ihe ọ pụrụ ịbụ maka van, ya biko s!
Gịnị ka ị na-eme ma ọ bụrụ na ị na-ahụ ihe dị ka?
N'ileghachi anya na ihe pụghị ịgọnahụ na-aga n'ihu na imebi kwesịrị n'ezie na-akpọ Police via 112. Na ihe ọmụma na uwe ojii na- 5 nnù pụọ, otu onye nwere ike ma e wezụga ya ma ọ bụ na-enyo enyo na ọnọdụ dị ka nke a mgbe “dị nnọọ” huru ihe-enyo anyị enyo, ọ pụkwara ịbụ smart ịkọrọ ya ozugbo Holm Group on Facebook. O nwere ike ịbụ na a mkpa image. N'ihi ya ruru ozugbo n'elu 300 Òtù na anya na na gburugburu Holm. Jikọọ gị onwe gị kwa ma ọ bụrụ na i nwere na-adịghị ama, chọpụta ihe na-eme na obodo.
Rescue Resources nwere, ma mkpa n'ime ime obodo
Rescue ụgbọ mmiri na Västbyn bụ ihe dị mkpa akụ maka a mmiri na-eri na-adị n'ime n'akụkụ osimiri ma ọ bụ na ọdọ mmiri. Ka ọ bụla ọzọ lanarị akụrụngwa na-na ebikebeghị ebe dị mkpa karịsịa mgbe ọ na-emekarị na-ewe ogologo oge n'ihi na mberede ọrụ na ụgbọ ihe mberede na-abata. Na Holm nwekwara ike napụta ụgbọ mmiri ojiji nke a na-akpọ enwekwukwa agbata obi na-na-na gbasasịa ebe. Na a gbagbuo mkpu na Holmsjön Mkpu SOS Oti mkpu na-akpaghị aka n'afọ ofufo gburugburu Holm via SMS na-enwe ohere iji napụta onye na-ata ahụhụ tupu ọha nchekwa pesonel nābia. Gụọ ihe banyere ngo Ike onye agbata obi na Holm ebe a na otú ọ na-arụ ọrụ. Ebe i nwere ike na-egosipụta mmasị gị ma ọ bụrụ na ị chọrọ-aka dị ka onye ọrụ afọ ofufo akụ.